Blọ ọrụ Masterbatch - China Masterbatch Manufacturers, Suppliers
Softening Masterbatch Product Description: Softening masterbatches JC5068B Seires na JC5070 bụ ndị gbanwetụrụ masterbatch mere si akwa-edu ngwaọrụ na elu-ọkwa adụ nwekwara, dị ka polima, elastomer na amide. Ọ na-e ọtụtụ-eji mba na-abụghị kpara ụlọ ọrụ. Soft masterbatches na-eme ka elu nke ngwaahịa ahụ kpoo, enweghị mmanu. Enwere ike iji ha na ngwa dịka uwe nchekwa, uwe ịwa ahụ, tebụl na-arụ ọrụ na akwa na akwa, akwa nhicha, akwa na ndị ọzọ ...
Hydrophilic Masterbatch – JC7010 Nkọwa: A na - eme JC7010 site na mmiri resin, polypropylene na ihe ndị ọzọ hydrophilic. A na-atụ aro ka ịmepụta akwa na-enweghị akwa na ọrụ hydrophilic nke nwere ike dochie mgbe emechara ya. Uru nke JC7010 bụ, ọ nwere arụmọrụ hydrophilic magburu onwe ya, na-adịghị egbu egbu, oke mmetụta antistatic na ezigbo dispersability. Ngwa: PP filament na staple fiber na eyi BCF yarn; Eyi na-abụghị kpara akwa gụnyere spunbonds a ...
Ire ọkụ Retardant Masterbatch-JC5050G Product Description: JC5050G bụ gbanwetụrụ masterbatch mere si pụrụ iche ire ọkụ retardant gị n'ụlọnga na polypropylene ọnụ na ihe ndị ọzọ. A na-eji ya emepụta eriri PP na akwa ndị na - abụghị kpara, dịka yarn BCF, ụdọ, akwa ụgbọ ala na akwa ákwà ngebichi wdg. Ekwurịta okwu ngwaahịa, eletriki ngwa, electronic ibu, m gbawara- àmà ngwaọrụ, akpakanamde akụkụ, ngwa ngwa ọgwụ, ezinụlọ ...
Anti-static Masterbatch-JC5055B Product Description: JC5055B bụ a gbanwetụrụ masterbatch nwere magburu onwe mgbochi static gị n'ụlọnga ọnụ na polypropylene resin na ngwaọrụ ndị ọzọ. A na-eji ya iji melite mmetụta antistatic nke ngwaahịa ikpeazụ na-enweghị mmezi nhazi. Uru JC5055B bụ na ọ nwere arụmọrụ dị ukwuu na antistatic nke nwere ike iru 108 Ω dịka usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị, adịghị egbu egbu, na nnukwu dispersibility. Ngwa: eyi filament na staple eriri, eyi na-abụghị kpara akwa na eyi ...